XOG: M/weynaha Puntland oo Isku shaandheyn cusub sameynaya.
Tags: puntland agaasimayaasha nagu soo
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa lafilayaa in uu maalmaha nagu soo aadan sameeyo isku shaandheynku wajahan Agaasimayaasha guud ee wasaaraddaha dawladda, wararka ayaana xaqiijinaya in todobaadyada nagu soo beegan la magacaabi dono xubnaha cusub.
Agaasimayaasha wasaaraddaha badankooda ayaa lagu sameynayaa Isbedelo, sidda ay sheegayaan wararka laga helayo Madaxtooyada Puntland.
Wajiyo cusub ayaa lafilayaa in ay kasoo dhexmuuqdaan Agaasimayaasha, iyadoo ay wararka qaar sheegayaan in ay u badnaan doonto isku bedel guud oo lagu sameeyo xubnaha horey u joogay
Madaxweynaha Puntland, wuxuu balan qaaday in uu isbedel maamul ka hirgalin doono Puntland, markii uu xukunka qabtay dad badana ayaana rumeysan in aysan wali jirin wax qorshe ah oo laga sameeyey marka la eego sida ay wax ku socdaan.
Mr, Deni ayaa dhawaan ka sheegay munaasabadii lagu xusayey Sannad guuradii 21 aad ee Puntland in ay dadaal badan galin doonaan sidii loo tayeyn lahaa adeegyada guud ee Xukuumadiisu u hayso shacabka, xili ay waxyaabaha qaarkood wali taagan yihiin.
Meelaha Isha gaarka ah lagu hayo waxaa kamid ah sida u maareeyo saami qeybsiga Agaasimayaasha guud, iyadoo horey loo ceyriyey qaar kamid ah Agaasimayaasha wasaaraddaha iyo kuwa madax banaan qaarkood